ယောက်ျားလေးတိုင်း မျှော်လင့်ထားတဲ့ အိပ်မက် မဟေသီ ဆိုတာ
May 25, 2018 By Buzz Myanmar News in အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ, အမျိုးသားဆိုင်ရာ Tags: မဟေသီ, လက်မောင်း, ရိုးသားမှု
နောက်ဆုံးစစ်တမ်းကောက်ဖော်ထုတ်ချက်များအရ ယောင်္ကျားလေး တွေကို ရူးမတတ်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အရာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?မိန်းကလေးတွေဆီက ယောင်္ကျားလေးတွေအစွဲမက်ဆုံးအရာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် အခုပဲဖတ်ကြည့်ရအောင်…
တချိန်တုန်းကတော့ ရှည်လျားတဲ့ပေါင်တံဟာ အသက်ပဲပေါ့။အခု နောက်ဆုံးသုတေသနစစ်တမ်းတွေအရတော့ သူတို့ကိုစွဲမက်စရာကောင်းစေတာက ရှည်လျားတဲ့ လက်မောင်း လို့ ဝိုင်းထောက်ခံထားကြပါတယ်။
ယောင်္ကျားလေး တွေဟာ ခေတ်မီထက်မြက်တည်ငြိမ်တဲ့ မိန်းကလေး တွေကို ပိုသဘောကျလေ့ရှိတယ်လို့ အများကထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် လေ့လာချက်များအရ အနည်းငယ်ပေါတောတောနေတတ်တဲ့သူတွေကို ပိုသဘောကျကြပါတယ်။
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို အမြဲတမ်းပြုံးနေတဲ့မိန်းကလေးတွေထက် ယောင်္ကျားလေးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာ မရှိပါဘူး။ပြုံးနေတယ့်မိန်းကလေးဟာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလို့ သူတို့ခံယူထားပါတယ်
ဒီအချက်ကတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေ အမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ထားတာမရှိပဲ ပွင့်လင်းရိုးသားနေတတ်တာမျိုးကို သဘောကျကြပါတယ်။
ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ အနီရောင်ကို စွဲလမ်းလွယ်ပါတယ်။အနီရောင်ဝတ်စုံဆင်မြန်းထားတဲ့မိန်းကလေးသာဆို အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင် သူတို့ကိုဖမ်းစားနိုင်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။
မျက်လုံးခပ်ကျယ်ကျယ်ပြူးပြူးလေးနဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်ဝန်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့အမြင်မှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ယောင်္ကျားလေးအများစု နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝBig Eyeကို ဆိုလိုတာနော်။
ရှည်လျားတဲ့ဆံနွယ်ပိုင်ရှင်မိန်းကလေးတွေဟာ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရကြပါတယ်။ဆံနွယ်လေးတွေ လေအဝှေ့မှာ လွင့်ခါနေတာမျိုးကို သူတို့သဘောကျကြပါတယ်။
ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ အတုအယောင်တွေကို မနှစ်သက်တတ်ကြပါဘူး။အရှိကိုအရှိအတိုင်း လက်ခံတတ်ကြသလို အမြဲလိုလို ပြင်ဆင်ခြယ်သနေတာထက် ပါးပါးလေးသာပုတ်ထားတဲ့မျက်နှာမျိုးကို ပိုသဘောကျကြပါတယ်။
ယောကျြားလေးတိုငျး မြှျောလငျ့ထားတဲ့ အိပျမကျမဟသေီ ဆိုတာ
နောကျဆုံးစဈတမျးကောကျဖျောထုတျခကျြမြားအရ ယောင်ျကြားလေးတှကေို ရူးမတတျဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ အရာတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ?မိနျးကလေးတှဆေီက ယောင်ျကြားလေးတှအေစှဲမကျဆုံးအရာတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ? ဟုတျကဲ့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ အခုပဲဖတျကွညျ့ရအောငျ…
တခြိနျတုနျးကတော့ ရှညျလြားတဲ့ပေါငျတံဟာ အသကျပဲပေါ့။အခု နောကျဆုံးသုတသေနစဈတမျးတှအေရတော့ သူတို့ကိုစှဲမကျစရာကောငျးစတောက ရှညျလြားတဲ့လကျမောငျးလို့ ဝိုငျးထောကျခံထားကွပါတယျ။
ယောင်ျကြားလေးတှဟော ခတျေမီထကျမွကျတညျငွိမျတဲ့ မိနျးကလေးတှကေို ပိုသဘောကလြရှေိ့တယျလို့ အမြားကထငျကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့ လလေ့ာခကျြမြားအရ အနညျးငယျပေါတောတောနတေတျတဲ့သူတှကေို ပိုသဘောကကြွပါတယျ။
ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာမဆို အမွဲတမျးပွုံးနတေဲ့မိနျးကလေးတှထေကျ ယောင်ျကြားလေးကိုဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့အရာ မရှိပါဘူး။ပွုံးနတေယျ့မိနျးကလေးဟာ ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံးလို့ သူတို့ခံယူထားပါတယျ
ဒီအခကျြကတော့ ယောင်ျကြားလေးတှေ အမွဲထညျ့သှငျးစဉျးစားလရှေိ့တဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ဘာဟနျဆောငျပနျဆောငျဖုံးကှယျထားတာမရှိပဲ ပှငျ့လငျးရိုးသားနတေတျတာမြိုးကို သဘောကကြွပါတယျ။
ယောင်ျကြားလေးတှဟော အနီရောငျကို စှဲလမျးလှယျပါတယျ။အနီရောငျဝတျစုံဆငျမွနျးထားတဲ့မိနျးကလေးသာဆို အကွညျ့တဈခကျြနဲ့တငျ သူတို့ကိုဖမျးစားနိုငျဖို့ သခြောသလောကျရှိပါတယျ။
မကျြလုံးခပျကယျြကယျြပွူးပွူးလေးနဲ့အပွဈကငျးစငျတဲ့မကျြဝနျးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့မိနျးကလေးတှကေတော့ ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့အမွငျမှာ ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံးဖွဈနတေတျပါတယျ။ယောင်ျကြားလေးအမြားစု နှဈသကျသဘောကတြဲ့ လက်ခဏာတဈရပျလညျးဖွဈပါတယျ။သဘာဝBig Eyeကို ဆိုလိုတာနျော။
ရှညျလြားတဲ့ဆံနှယျပိုငျရှငျမိနျးကလေးတှဟော ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ အာရုံစိုကျမှုကို စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျး ရကွပါတယျ။ဆံနှယျလေးတှေ လအေဝှမှေ့ာ လှငျ့ခါနတောမြိုးကို သူတို့သဘောကကြွပါတယျ။
ယောင်ျကြားလေးတှဟော အတုအယောငျတှကေို မနှဈသကျတတျကွပါဘူး။အရှိကိုအရှိအတိုငျး လကျခံတတျကွသလို အမွဲလိုလို ပွငျဆငျခွယျသနတောထကျ ပါးပါးလေးသာပုတျထားတဲ့မကျြနှာမြိုးကို ပိုသဘောကကြွပါတယျ။